Umaki: emv | Martech Zone
I-Index Quick Chip: Isipiliyoni Esisheshayo, Esingcono se-EMV
ULwesine, May 24, 2018 ULwesine, May 24, 2018 Douglas Karr
Ngale ntambama, ngivakashele indodakazi yami ehhovisi layo (ngipholile kangakanani uBaba?). Ngama esitolo ngaphesheya komgwaqo, iFresh Market ngathatha ilungiselelo elihle lembali ledeski lakhe nokunye okuphatha abasebenzi bakhona. Lapho ngihlola, ngashaywa umoya… Ngafaka ikhadi lami lesikweletu le-EMV futhi lasebenza cishe ngaso leso sikhathi. Bekushesha kakhulu engake ngakubona ukuphuma komsebenzi nge-chip-enabled
Kungani Udinga Ukuthuthukisa Ikhadi Lakho Swayipha uye ku-EMV
NgoMsombuluko, Juni 15, 2015 NgoMsombuluko, Juni 15, 2015 Douglas Karr
Ngenkathi ngise-IRCE, ngahlala phansi ne-Intuit's SVP ye-Payments and Commerce Solutions, u-Eric Dunn. Kube ukubukeka okuvula amehlo ekukhuleni kwe-Intuit emakethe yokuthengisa ne-ecommerce. Eqinisweni, abantu abaningi abaqapheli kepha imali eningi igeleza nge-Intuit kune-PayPal uma kukhulunywa ngokuhweba okuku-inthanethi (uma ufaka izinsizakalo zabo zamaholo). I-Intuit iyaqhubeka nokuzama ukuba yisixazululo sokuphela kokuphela kwanoma yiliphi ibhizinisi le-ecommerce noma elidayisa lapho
Ama-Smartcards akhishwa eminyakeni embalwa elandelayo
ULwesibili, April 15, 2014 NgoMsombuluko, Ephreli 14, 2014 Douglas Karr
Wow… uma ucabanga ngayo yonke i-hardware ezinikele futhi ethembele kumakhadi wesikweletu anemigqa kazibuthe, lokho kuyithoni yemishini nezindleko laphaya ezizokushintsha. Nokho, eminyakeni embalwa elandelayo, yilokho kanye okuzokwenzeka! Amakhadi wesikweletu wendabuko asendleleni yokuphuma. Kuthathe ukugqekezwa kwamakhadi esikweletu ama-Target ayisigidi ezingama-70 ngesikhathi samaholide sika-2013 ukukhuthaza iCongress ukuthi iyeke amakhadi anemigqa engavikelekile kakhulu asetshenziswa